WAR – democracy for burma
On May 6, 2015 May 6, 2015 By Burma Myanmar newsIn နယ်စပ်ဂိတ်ကနေပြန်ဝင်လာပြီးဖွက်ထားတဲ့Leaveacomment
Lay Lwin M AF
#Myanmar #apologizes #China over #dropping #bomb into #Yunnan, killing five Chinese.
On April 2, 2015 April 2, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, chinaLeaveacomment
၀က်နမောင်လွင် ၏ ပြောစကား အတိအကျ ——— “On behalf of the Myanmar government and military, I officially apologize to China and express my deep sympathy to the families of the victims and the injured.” “Myanmar is willing to keep in touch with China over compensation for the victims and injured and make proper arrangement.” “Myanmar will ensure those involved in the incident are accountable for and published in accordance with law, strengthen domestic management to prevent similar incidents from happening.” Wunna Maung Lwin
!! #CAREFUL #MYANMAR #ENEMY #PREPARE #BATTLE
On March 26, 2015 March 26, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, china, KOKANG, MYANMAR, WARLeaveacomment
Be careful enemy post !!!!! ENEMY NEWS / 2015.3.26 20:00 Myanmar government troops shelled continuously courageous Shi Guolin hills, when the sky was black, courageous allies to start fighting back./
The current situation is: Chinese fighter in the sky to defend China’s territorial airspace, ground allies along the water in the river to Burma Street ambushed old turtle car. Ah, the weather forecast says rain will beafew days until the 29th of this month under. However, the weather forecast is not even allowed, saying it was raining, but it is falling hail. There is, there have been enough of ethnic discrimination against ethnic oppression and courageous man to join the allies, now allies has shrunk! Lane!
TRUE ? Tomorrow, 27, it is said enemies of Burma Myanmar prepare for battle. Images Kokang and allies battalion.
#MYANMAR #CHINA #Yunnan #border #residents #Flags #antibomb
On March 26, 2015 By Burma Myanmar newsIn BORDER, Burma, china, MYANMAR, photo newsLeaveacomment
Yunnan Border residents hang flags anti bomb proof
#Chinese #fighter #jets #patrolled over the #China #Myanmar #borders
On March 16, 2015 March 16, 2015 By Burma Myanmar newsIn BORDER, Burma, china, MYANMARLeaveacomment
China’s air force has sent several batches of warplanes since March 13 to track, monitor, warn and chase away Myanmar’s military planes flying close to China’s territory. China’s air force always keeps high alert and close watch on the air situation. Recently, the PLA Air Force has specially strengthened its monitor and control over the air situations in the border areas between China and Myanmar, according to Shen Jinke. Col. Shen pointed out that China’s air force will adopt measures to strengthen its response action against any air situation in China-Myanmar border areas, so as to safeguard China’s airspace sovereignty. Chinese fighter jets patrolled over the China-Myanmar borders after the deadly bombing to “track, monitor, warn and chase away” Myanmar military planes flying close to the Chinese side. BEIJING, March 15 (Xinhua) — China has both responsibility and ability to safeguard the stability of its border areas with Myanmar, Premier Li Keqiang said on Sunday. His remarks came two days after Beijing lodged representations to Myanmar on the deadly bombing inaChinese city bordering the conflict-hit country. A bomb dropped byaMyanmar warplane on Friday killed four Chinese people and injured nine others in Lincang of Yunnan Province. “What happened was deeply distressing,” Li said atapress conference after the conclusion of China’s annual legislative session. “We have responsibility and ability to firmly safeguard stability in the border areas between the two countries and protect the life and property of our people.” China has warned that it will takea“firm and decisive action” to protect the safety of its people if any further deadly stray fire incident happens again. Vice Chairman of the Central Military Commission Fan Changlong has urged Myanmar to punish the perpetrators, as well as apologize to and compensate the families of the victims.
“We would like to express our deep sorrow for (the) death and injuries of Chinese nationals living in border areas asaconsequence,”
On March 16, 2015 March 20, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, china, Dashuijing, MYANMAR, VIDEOLeaveacomment
BE CAREFUL KOKANG TERRORIST NEWS According to news in front of the villagers, around 16:00 pm on March 20, again on the Chinese territory of Burmese fighters bomb, bomb placement in China Kang Meng Lincang town heap of mussels hole millet Hill (small Lu field), no casualties found. Transboundary unclear whether the aircraft, but this is already the fourth time this month, Burmese fighters to bomb the territory of China. Chinese fighter and no red flag 12 launch. After the incident, witnesses the first time to findaplacement. The bomb did not explode, hanging above the parachute. According to eyewitnesses, when he saw the Burmese military aircraft pitched five bombs, three of which should fall in Myanmar, there are two should fall on the territory of China. The figure isabomb fell on the heap Meng mussels hole Rue field eyewitness discovery. Another bomb fell on the side of Myanmar, the distance between the nearest Chinese border is just 10 meters. unofficial transl.အဆိုပါကြေးရှာသားမြားမြား၏ရှမှေ့ောကျ၌သတငျး၏အဆိုအရမတျလ 20 ရကျနကေ့ 16:00 နာရီခနျ့, တဖနျမွနျမာတိုကျလယောဉျဗုံး, mussels အပေါကျပွောငျးဆနျတောငျတနျး (သေးငယျတဲ့ Lu ကလယျပွငျ) ၏တရုတျနိုငျငံ Kang Meng နှငျ့ Lincang မွို့အမှိုကျပုံအတှကျဗုံးနရောခထြားမရှိ, ထိခိုကျသဆေုံးမှု၏တရုတျပိုငျနကျအပျေါ တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ လယောဉျဖွဈစမေရှငျးလငျး Transboundary, သို့သျောဤယခုပငျတရုတျပိုငျနကျနယျမွကေိုဗုံးခှဲတိုကျခိုကျရနျမွနျမာတိုကျလယောဉျယခုလစတုတ်ထအကွိမျဖွဈသညျ။ တရုတျတိုကျလယောဉျနှငျ့မြှမတို့အနီရောငျအလံ 12 ပဈလှတျ။ ထိုအဖွဈအပကျြပွီးနောကျ, မကျြမွငျသကျသမြေားအလုပျနရောခထြားတှရှေိ့ရနျပထမဦးဆုံးအခြိနျ။ အဆိုပါဗုံးကိုလထေီးအထကျကွိုးဆှဲခြ, ပေါကျကှဲဘဲနကွေ၏။ သူကမွနျမာစဈတပျလယောဉျပြံမွနျမာလဲသငြ့သုံးရာငါးဦးဗုံး, ကိုဆောကျကိုမွငျသောအခါမကျြမွငျသကျသမြေားအဆိုအရ, နှဈဦးတရုတျပိုငျနကျအပျေါကရြောကျသငြ့ရှိပါတယျ။ အဆိုပါကိနျးဂဏနျးကဗုံးကိုအမှိုကျပုံ Meng နှငျ့ mussels အပေါကျ Rue လယျပွငျမကျြမွငျသကျသရှောဖှတှေရှေိ့မှုပျေါမှာလှဲဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျဗုံးမွနျမာနိုငျငံဘကျခွမျးမှာပွပျဝပျလကျြ, အနီးဆုံးတရုတျနယျစပျအကွားအကှာအဝေးကို 10 ပဲမီတာဖွဈသညျ။ . တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ပွိုင့်-၁၄၇၉ တောင်ကုန်းအား သိမ်းပိုက်ရရှိ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ နေပြည်တော် မတ် ၁၉ ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူများအနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသ၏ ကန့်သတ် ချက်များကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ ထူထပ်ရှုပ်ထွေးသော တောတောင် သဘာဝအနေအထား ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်အသုံးချကာ ချဉ်းကပ်နိုင်သော လမ်းကြောင်းများ တစ်လျှောက် သတ်ကွင်းများ ကြိုတင်စီမံထားခြင်း၊ အခြေပြုရာတောင်ကုန်းများ တွင် ဘန်ကာများ အခိုင်အခံ့ တည်ဆောက် ထားခြင်း၊ ပုန်းခိုရှောင်တိမ်းနိုင်ရန် မြေခွေးကျင်းများ တူးထားခြင်း၊ ၎င်းတို့ လွယ်ကူစွာ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ရန် လမ်းကြောင်းများ ဖောက်လုပ်ထားခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်၍ ခုခံတိုက်ခိုက် လျက်ရှိရာ တပ်မတော်သားများ အနေဖြင့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိသည်။ သောင်းကျန်း သူများသည် ဒေသ၏ အချက်အချာကျပြီး အရေးကြီးသော တောင်ကုန်းများတွင် အဓိက အခြေပြု၍ လောက်ကိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးအား လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ၎င်းတောင်ကုန်းများအား လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေး အပြင်းအထန်ကြိုးစား လျက်ရှိရာတွင် တပ်မတော်အနေဖြင့် ထိရောက်သော လေကြောင်း ပစ်ကူ၊ လက်နက်ကြီးပစ်ကူများဖြင့် တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့ရာ လောက်ကိုင်ဒေသ၏ အချက် အချာနေရာ အများစုအား သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်းအနီးရှိ ပွိုင့်-၁၄၇၉ တောင်ကုန်းအား ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ၎င်းတောင်ကုန်း အား သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် သောင်းကျန်းသူများက တောင်ကုန်းပေါ် တွင် အခိုင်အမာအခြေ ကုပ်ယူ၍ တောင်စောင်းများ တစ်လျှောက် သက်ကွင်း အဖြစ်ရှင်းလင်းကာ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် တရစပ်ခုခံ တိုက် ခိုက်လျက်ရှိရာ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက ထိရောက်သော ပစ်ကူပစ်အားနှင့် အတူ ရဲဝံ့စွန့်စားစွာ တက်ရောက်၍သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဆက် လက်၍ ၎င်းတောင်ကုန်း၏ အရှေ့ဘက်ရှိ ပွိုင့်-၁၅၆၄ တောင်ကုန်းအား ထိုးစစ် ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းအပြင် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ်၊ ၁၃၂ သွားကားလမ်းအား စိုးမိုး ထားသည့် ရှင်ခုတ်ထန် ကျေးရွာ မြောက်ဘက် တောင်ကုန်းတွင် အခြေပြု ခံစစ်ယူထားသည့် သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုများအား တပ်မတော် စစ် ကြောင်းများက ရင်ဆိုင်ထိန်းချုပ် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ထို့အတူ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သော ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်းအား ယနေ့နံနက် ပိုင်းတွင် ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အင် အားစုများက ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရရှိရေးအတွက် လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များ၊ စက်သေနတ်ကြီးများဖြင့် ဝိုင်းပတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာ ခဲ့ရာ တပ် မတော်စစ်ကြောင်းများက ပစ်ကူ၊ ပစ်အားသုံး၍ သောင်းကျန်းသူများ ကို ပြန်လည်ထိန်းချုပ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကုန်းကြမ်းမြို့မြောက်ဘက် လော်ကွာကျိုင်း ကျေးရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ မာလုရွှေကျေးရွာအနီး တစ်ဝိုက်ရှိ တောင်ကုန်းများ တွင် အခြေပြုနေသော ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုများအား လေကြောင်းမှ ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်များတွင် တပ်မတော်မှ စစ်သည် ၁ ဦး တိုင်းပြည် အတွက် အသက်ပေးလှူခဲ့ပြီး အရာရှိ၊ စစ်သည် ၃၁ ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ —————————————————- Army captures strategic hill in Laukkai area —————————————————– Nay Pyi Taw, 19 March — Fierce fighting broke out Thursday between the Myanmar Army and Kokang insurgents for control ofahilly zone in the Laukkai region, with government forces seizing the strategically important point. After taking Point 1479, army columns continued their attacks on Point 1564 to the east of Point 1479. Army battalions also confronted the enemy atahill located to the north of Shin Khot Htan village overlooking the road leading to Border Post No. 132. In the morning Kokang troops attacked Point 1468 hill which is under the control of the army. Tatmadawmen bravely repelled the enemy. The Myanmar Air Force also attacked insurgents, takingastronghold near villages to the north of Kongyan town. One army soldier died and 30 others were wounded in the fighting. Myawady MOI တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ပွိုင့်-၁၄၇၉ တောင်ကုန်းအား သိမ်းပိုက်ရရှိ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® နေပြည်တော် မတ် ၁၉ ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူများအနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသ၏ ကန့်သတ် ချက်များကို အခွင့်ကောင်း ယူ၍ ထူထပ်ရှုပ်ထွေးသော တောတောင် သဘာဝအနေအထား ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်အသုံးချ ကာ ချဉ်းကပ်နိုင်သော လမ်းကြောင်းများ တစ်လျှောက် သတ်ကွင်းများ ကြိုတင်စီမံထားခြင်း၊ အခြေပြုရာတောင်ကုန်းများ တွင် ဘန်ကာများ အခိုင်အခံ့ တည်ဆောက် ထားခြင်း၊ ပုန်းခိုရှောင်တိမ်းနိုင်ရန် မြေခွေးကျင်းများ တူးထားခြင်း၊ ၎င်းတို့ လွယ်ကူစွာ လှုပ်ရှားသွား လာနိုင်ရန် လမ်းကြောင်းများ ဖောက်လုပ်ထားခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်၍ ခုခံတိုက်ခိုက် လျက်ရှိရာ တပ်မတော်သားများ အနေဖြင့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိသည်။ သောင်းကျန်း သူများသည် ဒေသ၏ အချက်အချာကျပြီး အရေးကြီးသော တောင်ကုန်းများတွင် အဓိက အခြေပြု၍ လောက်ကိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးအား လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ၎င်းတောင်ကုန်းများအား လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေး အပြင်းအထန်ကြိုးစား လျက်ရှိရာတွင် တပ်မတော်အနေဖြင့် ထိရောက်သော လေကြောင်း ပစ်ကူ၊ လက်နက်ကြီးပစ်ကူများဖြင့် တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့ရာ လောက်ကိုင်ဒေသ၏ အချက် အချာနေရာ အများစုအား သိမ်းပိုက်ရ ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်းအနီးရှိ ပွိုင့်-၁၄၇၉ တောင်ကုန်းအား ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ၎င်းတောင်ကုန်း အား သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် သောင်းကျန်းသူများက တောင်ကုန်းပေါ် တွင် အခိုင်အမာအခြေ ကုပ်ယူ ၍ တောင်စောင်းများ တစ်လျှောက် သက်ကွင်း အဖြစ်ရှင်းလင်းကာ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် တရစပ်ခုခံ တိုက် ခိုက်လျက်ရှိရာ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက ထိရောက်သော ပစ်ကူပစ်အားနှင့် အတူ ရဲဝံ့စွန့်စားစွာ တက်ရောက်၍သိမ်းပိုက်နိုင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဆက် လက်၍ ၎င်းတောင်ကုန်း၏ အရှေ့ဘက်ရှိ ပွိုင့်-၁၅၆၄ တောင်ကုန်းအား ထိုးစစ် ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းအပြင် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ်၊ ၁၃၂ သွားကားလမ်းအား စိုးမိုး ထားသည့် ရှင်ခုတ်ထန် ကျေးရွာ မြောက်ဘက် တောင်ကုန်းတွင် အခြေပြု ခံစစ်ယူထား သည့် သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုများအား တပ်မတော် စစ် ကြောင်းများက ရင်ဆိုင်ထိန်းချုပ် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ထို့အတူ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သော ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်း အား ယနေ့နံနက် ပိုင်းတွင် ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အင် အားစုများက ပြန်လည် သိမ်းပိုက်ရရှိရေးအတွက် လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များ၊ စက်သေနတ်ကြီးများဖြင့် ဝိုင်းပတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာ ခဲ့ရာ တပ် မတော်စစ်ကြောင်းများက ပစ်ကူ၊ ပစ်အားသုံး၍ သောင်းကျန်းသူများ ကို ပြန်လည်ထိန်းချုပ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကုန်းကြမ်းမြို့မြောက်ဘက် လော်ကွာကျိုင်း ကျေးရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ မာလုရွှေကျေးရွာအနီး တစ်ဝိုက်ရှိ တောင်ကုန်းများ တွင် အခြေပြုနေသော ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုများအား လေကြောင်း မှ ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်များတွင် တပ်မတော်မှ စစ်သည် ၁ ဦး တိုင်းပြည် အတွက် အသက်ပေး လှူခဲ့ပြီး အရာရှိ၊ စစ်သည် ၃၁ ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၁၉ ရက်နေ့တရုပ် မီဒီယာ မှ ဗုံးမှန်သေဆုံးတရုပ် မိသားစုတွေကလျော်ကြေးလက်မခံသေးပါ ။ စုံစမ်း စစ်ဆေးဆဲ ဖြစ်သည် ။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသော ဒေသများ မြန်မာတပ်မှ ရရှိသော လက်နက်များ တရုပ်စာဖတ်တတ်သူများ ကူညီပြီး ဘာသာ ပြန်ပေးပါ ။ ################# ကိုးကန့်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးထွန်းမြတ်လင်းက ဒေသခံများပါ ပူးပေါင်းလာ၍ ကိုးကန့်အင်အား ၃,၀၀၀ နှင့် မဟာမိတ် (TNLA နှင့်ရက္ခိုင့်တပ်မတော်)က ၂,၀၀၀ စုစုပေါင်း ၅,၀၀၀ ခန့်ရှိနေပြီဟုဆိုသည်။ အစိုးရတပ်မတော်ကလည်း ဒေသကွပ်ကဲရေးစစ်ဌာနချုပ် (ဒစကလောက်ကိုင်)၊ တပ်မ (၃၃)၊ တပ်မ (၆၆) ၊ တပ်မ (၁၁)၊ စရက (၁၆) စသည့် တပ်မလေးခုအပါအ၀င် အင်အားစုစုပေါင်းခြောက်ထောင်မှ ခုနစ်ထောင်ခန့် ၀န်းရံထားရာ အင်အားအချိုးအစားကလည်း သိပ်မကွာလှကြောင်း စစ်ရေးလေ့လာသူများကပြောသည်။ ကိုးကန့်ကို ထိုးစစ်များ အရှိန်ဆက်မြှင့်ရန် တပ်မ(၆၆)ကို ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် အပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုးစစ်အရှိန်မြှင့်မည့်အချိန်တွင် တရုတ်ဘက်သို့ ဗုံးကျသည့်ပြဿနာပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တပ်များကို ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် တိုက်မည့်နေရာ အနီးတစ်ဝိုက်ချထားပေးပြီး လူအင်အားအလုံးအရင်းကို လေကြောင်းဖြင့် သယ်ယူပေးသည့် အကြီးဆုံးလေကြောင်းချီ ပြောင်းရွှေ့မှု လည်းဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးကပြောကြားသည်။ ကိုးကန့်ဒေသသည် နယ်မြေအနေအထားအရ တောတောင်ထူထပ်ခြင်း၊ ကိုးကန့်တပ်များက နယ်ခံများဖြစ်၍ နယ်မြေကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ ဒေသခံလူထုနှင့် လူမျိုးတူခြင်း နှင့် ဖုန်ကြားရှင်မှာ အစဉ်အလာအရ သြဇာညောင်းသည့် စစ်ဒေသခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ခြင်း၊ ယခုတိုက်ပွဲကို လူသူလက်နက်အင်အားသာမက ၄င်းတို့ကို ၀န်းရံမည့် တပ်ပေါင်းစုများကိုပါ ရှာဖွေစည်းရုံးထားနိုင်ခြင်း၊ ထို့အပြင် နယ်စပ်ခွထားသော တောင်ကုန်းအချို့တွင် တပ်စခန်းများချထားခြင်းနှင့် ယခုနောက်ဆုံး လေကြောင်း ပစ်ကူနှင့် လက်နက်ကြီးပစ်ကူများ တရုတ်ဘက်ကျရောက်ခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော် ထိုးစစ်တွင် လေကြောင်းပစ်ကူကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရတော့မည်ဖြစ်ရာ ကိုးကန့်တိုက်ပွဲသည် အနည်းဆုံး နောက်ထပ် လေးငါးလအထိ ကြာမြင့်သွားဖွယ်ရှိနေကြောင်း ထိုဒေသတွင် အချိန်အတော်ကြာနေထိုင်ခဲ့သည့် စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများက ပြောသည်။ လောက်ကိုင် မြို့အား ကိုးကန့်သောင်းကျနိးသူအဖွဲ့ များ လာရောက်နှောက်ယှက်တိုက်ခိုက် ကုန်းကြမ်း-မော်ထိုက်ကားလမ်းအနီး တောင်ကုန်း (၅)ကုန်းအားသိမ်းပိုက် •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူများသည် ၄င်းတို့ခံစစ်ယူ အခြေပြုထားသည့် အချက်အခြာကျသောနေရာများ နှင့် စစ်ဗျူဟာ အရေးကြီးမြေနေရာအများအပြားအား စွန့်လွှတိခဲ့ရပြီး နောက်စစ်ရေးထွက်ပေါက်အဖြစ် လောကိကိုင် မြို့အားအဝေးမှ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်း လမ်းကြောင်းများအား ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်လာပါသည်။ ယနေ့ ၁၈-၃-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် လောက်ကိုင်မြို့ အားတိုက်ခိုက်ရနိ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အဖွဲ့ ၆ဖွဲ့ခွဲချီတက် လာစဉ် တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများဖြင့် ထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားပြီးဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ကုန်းကြမ်း တာကျိုင်း မော်ထိုက်သွားကား လမ်းအား စိုးမိုးထားသည့် ကုန်းကြမ်းမြို့မြောက်ဘက် လော်ကွာကျိုင်းအနီးရှိ သောင်းကျန်းသူ အခြေပြုနေရာများအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် လေကြောင်းပစ်ကူ ရယူပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ သောင်းကျန်းသူအခြေပြု ခံစစ်တောင်ကုန်း ၅ကုန်း အားသိမ်းပိုက်ရ ရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင် စီအောကျေးရွာ အနီးတွင် နံနက်ပိုင်း က တိုက် ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ပါစင်ကျော် ကျေးရွာနှင့် နယ်နမိတိမှတိတိုငိ အမှတိ ၁၃၇ အားဆက်သွယ်ထားသော တပ်မတော်မှ သိမ်းပိုကိ စိုးမိုးထားသည့် ပွိုင့် ၁၄၆၈တောင်ကုန်း အား ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုများမှ အဖွဲ့ များခွဲ၍ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ညပိုင်းမှစတင်ကာ ဝင် ရောက်တိုက်ခိုက်လာသဖြင့် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွား နေပါသည်။ အထက်ပါဖြစ်စဉ်များတွင် ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အလောင်းရ ၃ လောင်း ဒုံးပစ်လောင်ချာ ၂လက် လက်နက်ငယ်မျိုးစုံ ၆ လက် ခဲယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး တပ်မတော် သား ၁၃ ဦးကျဆုံးကာ ၂၈ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရ ရှိ ခဲ့ပါသည်။ မတိလ ၁၇ ရက် မွန်းလွှဲပိုင်းက လောက်ကိုငိမြို့ အမှတိ ၁ ရပ်ကွက်ရှိနေအိမ် တစ်လုံးနှင့် ပျံကျတဲ တစ်လုံးအား တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပူးပေါင်းရှာဖွေရာ အမျိုးသား ၁၆ဦးနဲ့အတူ မက်သာအက်ဖဒရင်း( ICE)၇ ကီလို ဂရမ် ကာလတန်ဖိုး( ၁၃၁၃သိန်းကျော်ဖိုး) အက်ဖဒရင်း ၂၁ ကီလိုဂရမ် ကာလတန်ဖိုး (၅၆၇သိန်းခန့်) WY ဆေးပြား ၆၀၀၀ပြား (သိန်း ၉၀)ခန့် WY စိတ်ကြွဆေးပြား အမှုန့်ရောရော ၁၃၀.၅ ဂရမ် ကာလတန်ဖိုး (၂၀၆ သိန်းခန့်) ဘိန်းဖြူဘလောက်တုန်း ၃၀၀ ဂရမ်ခန့် ၁ တုံး ကာလတန်ဖိုး( သိန်း ၆၀) နှင့် ဆက်စပ်အရောင်တင် ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရမိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ လောက်ကိုင်ဒေသ၊ တအာင်းတပ်မတော်(TNLA) ၊ MNDAA၊ AA တပ်ပေါင်းစုနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက် လောက်ကိုင်ဒေသ၊ ကုန်းကြမ်းအထက်ဘက်တွင် မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၀၇း၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၁၄း၀၀ နာရီ အချိန်ထိ တအာင်းတပ်မတော်၊ ဗျူဟာ(၄)လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၈၁၈) ၊ MNDAA၊ AA တပ်ပေါင်းစုနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ နှစ်ဖက် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲတွင်နှစ်ဘက်ထိခိုက်ကျဆုံးမှုမသိရှိရသေးပါ။ တိုက်ပွဲနောက်ဆက်တွဲသတင်းအား ဆက်လက်တင်ပြသွားပါမည်။ သတင်နှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန PSLF/TNLA 18.MARCH 2015 RIP KILLED BY KOKANG TERRORISTS AND ALLIES ၁၈ – ၃ -၂၀၁၅ ========== ယခုလက်ရှိကိုးကန့်ဒေသတိုက်ပွဲများတွင် ကိုးကန့်သောင်ကျန်းသူများက တောင်ကုန်းများတွင် လိုဏ်ခေါင်းများဖောက်လုပ်ပြီး ခြေကုပ်ယူ တိုက်ခိုက် သော်လည်း ယင်းလိုဏ်ခေါင်းများဟာ တရုတ်နိုင်ငံထိ ဖောက်လုပ်ခြင်း ရှိမရှိ အတည်မပြုနိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦးကပြောကြား သည်…… လေယာဉ်နဲ့ဗုံးကြဲရင် လိုဏ်ခေါင်းထဲပြေးဝင်ပြီး လေယာဉ်အပစ်ရပ်တဲ့အချိန်ကြရင် လိုဏ်ခေါင်းထဲ ကနေပြန်ထွက်လာပြီး အပေါ်ကနေစီးပစ်ကြပါတယ် (မြေအောက်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းတွေ့ရသောကိုးကန့် သောင်းကျန်းသူများ ) Continue reading “!!#20/3 #ကိုးကန့်နယ်စပ်မှာစစ်ရေးပြင်ဆင်နေတဲ့တရုတ်တပ် #KOKANG #BORDER #CHINA” →
! ! #clip #ကိုးကန့်ဒေသတိုက်ပွဲတွင် #တပ်မတော်(လေ)မှကြဲချသောဗုံး #တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကျရောက်ပြီး
On March 14, 2015 March 16, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, china, MYANMARLeaveacomment
တရုပ် လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ 
ကိုးကန့် အဖွဲ့ က
လောက်ကိုင်နဲ့ချင်းရွှေဟော်
ဆက်သွယ် ထောက်ပံရေး လမ်းကြောင်း ဖြတ်တောက်ဖို့ 
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် ။
အရပ်သား ကားများ ကြက်ခြေနီများ မကျန်
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် ခဲ့ပါတယ် ။
မြန်မာ့ တပ်မတော်က မြင့်မားတဲ့ တောင်တန်းတွေပေါ်က
ခြေကုတ်ယူထားတဲ့ ကိုးကန့် အင်အား ၁၀၀၀ ခန့် ကို
ခြေလျှင် ခြေမြန် တပ်ရင်းတွေနဲ့မရှင်းလင်းနိုင်လို့ 
လေကြောင်း စစ်ကူ တောက်ရှောက် ယူခဲ့ရပါတယ် ။
ကိုးကန့်တပ်များ ကို လက်နက် ရိက္ခာ ထောက်ပံ့မှုကို
ပင်ဆန်းတောင်ကြားမှာ ရှိနေတဲ့ Dashuijing ကျေးရွာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
အခု နောက်ဆုံး တက်လာတဲ့ ဗီဒီယို အရ
မြန်မာဘက်က ထပ်မံတိုက်ခိုက်လျှင် လက်တုံ့ပြန်မည်ဟု
တရုတ်ပိုင်နက်အတွင်း မြန်မာဘက်မှ ထပ်မံတိုက်ခိုက်မှုများ ထပ်မံပြုလုပ်ပါက
“ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပိုင်းဖြတ်မှု ရှိရှိ” လက်တုံ့ပြန်ရလိမ့်မည်ဟု
ယင်းသို့ပြောဆိုချက်မှာ လူ ၄ ဦး သေဆုံးပြီး ၉ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားသော
မြန်မာ့တပ်မတော် လေ မှ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း ဗုံးကြဲချမှုကို
နေပြည်တော်သမ္မတရုံးမှ ငြင်းဆိုပြီး ကိုးကန့်သူပုန်များ၏
လက်ချက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားအပြီး ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
၁၄ – ၃ -၂၀၁၅ ——————– မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုတို့အကြား တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာ မြန်မာ့တိုက်လေယာဉ်ကပစ်တဲ့ ဗုံးဒဏ်ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသားလေးဦးသေဆုံးပြီး ကိုးဦးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း မြန်မာ နဲ့ တရုတ် နယ်စပ်ကို တရုတ်ဖက်က ဝေဟင်ပိုင်နက် အနီးကပ်စောင့်ကြည့် ဖို့ အတွက်ဆိုပြီး တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များ ပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ဆင်ဟွာ သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် …… ဒါအပြင်နယ်စပ်မြို့တစ်နေရာမှာလည်း ၁၆ ၃ ၂၀၁၅ ရက်မှာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မဲ့ အစီအစဉ် ရှိကြောင်းကိုလည်း တရုတ်ဝက်ဆိုက်ဒ်တခုမှာ ဖော်ပြ ထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် ……… (နယ်စပ်တွင်ရောက်ရှိနေသောတရုတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ) ကိုးကန့်ဒေသတိုက်ပွဲတွင် တပ်မတော်(လေ)မှကြဲချသောဗုံး တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကျရောက်ပြီး လေးဦးသေဆုံးခဲ့၍ ကျူးလွန်သူကို ဖော်ထုတ်အရေးယူပေးရန် တရုတ်တောင်းဆို ကိုးကန့်ဒေသတိုက်ပွဲတွင် တပ်မတော်(လေ)မှ ကြဲချလိုက်သည့်ဗုံး တရုတ်နိုင်ငံတွင်းသို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခြင်းကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသားလေးဦး သေဆုံးသည့်ဖြစ်စဉ်ကို အသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် ကျူးလွန်သူများကို ဖော်ထုတ်အရေးယူပေးရန် တရုတ်အစိုးရက မြန်မာအစိုးရထံ တောင်းဆိုလိုက် သည်။ သောကြာနေ့က တရုတ်ပိုက်နက်အတွင်း မြန်မာတိုက်လေယာဉ်မှ ကြဲချသည်ဆိုသော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် တရုတ်လေတပ်မှ တိုက်လေ ယာဉ်များကို နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တွင် ကင်းလှည့်ပျံဝဲခြင်းများ စတင်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း တရုတ်တပ်မတော်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားကြောင်း Pepole Daily China သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားသည်။ မတ်လ ၁၃ ရက် တရုတ်စံတော်ချိန် ညနေ ၄ နာရီ ၄၀ မိနစ်က နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီး တပ်စွဲထားသည့် ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့သို့ ဦးတည်ကြဲချ လိုက်သည့် မြန်မာ့တိုက်လေယာဉ်မှ ဗုံးအချို့မှာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ လင်စန်းမြို့ရှိ ကြံစိုက်ခင်းအတွင်း ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသား လယ်သမားလေးဦးသေဆုံးပြီး ကိုးဦးဒဏ်ရာရကြောင်း တရုတ်သတင်းမီဒီယာများက ဖော်ပြထားသည်။ ကိုးကန့်တိုက်ပွဲအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းသို့ ဗုံးကျရောက်ခြင်းမှာ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီး တရုတ်အစိုးရက ယခုဖြစ်စဉ်အပေါ် မြန်မာအစိုးရအား အပြစ်တင်ကြောင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူကို အပြစ်ပေးရန် မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်းအား တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လီဇောင်မင်က ချက်ချင်းဆင့်ခေါ်သတိပေးခဲ့သည်။ မြန်မာသံအမတ်ကြီး၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ ယနေ့ (မတ် ၁၄ ရက်)တွင် နေပြည်တော်၌ ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီး ဦးသန့်ကျော်က ပြောသည်။